५० वर्षदेखि अलपत्र रहेको राजविराज विमानस्थल छिट्टै सञ्चालनमा आउने
बैशाख १६, २०७५ रासस
राजविराज, करीब ५० वर्षदेखि अलपत्र रहेको सप्तरीको राजविराजस्थित विमानस्थल सञ्चालनमा आउने भएको छ ।
विमानस्थलको चौडाइ अझै बढाउनुपर्ने र धावनमार्गको दुवैतर्फ खाली जग्गा राख्नुपर्ने भएकाले करीब २२ बिघा जग्गा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था रहेको परियोजना प्रमुख महतोले भन्नुभयो ।
पर्यटन मन्त्रालयले उक्त जग्गा खरिदका लागि रु ५२ करोड विनियोजन गरिसकेको भए पनि अर्थमन्त्रालयले निकासा नदिँदा सो जग्गा खरिदको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
राजविराज विमानस्थलको निर्माण कार्य सकिएर परीक्षण उडानका लागि तयार हुनु सप्तरीवासीका लागि खुशीको कुरा भएको बताउँदै सप्तरीवासीले वर्षौंदेखि देखेको सपना बल्ल पूरा हुने सप्तरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अरुण प्रधानले भन्नुभयो ।
राजविराज विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि जिल्लाको पर्यटन प्रवद्र्धनका साथै आर्थिक समृद्धिमा मदत मिल्ने जिल्लास्थित उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष शंकर दासले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रकाशित : आइतबार, बैशाख १६, २०७५१४:५९
ट्रकसँग बस ठोक्किँदा १६ यात्रु घाइते, दुईको अवस्था ज्यादै गम्भीर !
घरनजिकै जंगलमा शिकार खेल्न गएका एकजना मृत फेला , अर्का बेपत्ता !
स्वास्थ्य चौकीमा सुत्केरीको मृत्यु भएपछि आन्दोलन !
बसमै हस्तमैथुन काण्डको नेपाल प्रहरीले सुक्ष्म अनुसन्धान गर्दै ! [विज्ञप्ति सहित]
७ सेकेन्ड अगाडि बिगुल